Nzira yekuvandudza sei munhu wangu mukuru webhusaiti yepamusoro?
Mumazuva edu SEO inotora basa rinokosha mubhizimusi chero ripi zvaro pasinei nokuti mune nzvimbo yekudya yakagadzikana kana yekutengesa zvepabonde. Muzviitiko zvose izvi, chinangwa chikuru chebhizimisi ndechekukwezva vashanyi vakawanda nekuwedzera mari yavo. Mazuva ano kuita kuti bhizinesi rako ribudirire, unofanira kuisa paIndaneti nekugadzirisa maererano nezvose zvinotsvaga injini. Iyo yakakwirira iwe yepamusoro paSERP, iyo inowedzera kutengesa iwe.
kugadzirwa kwevanhu vakuru kuenzaniswa nekugadzirisa kwemazuva ega nekuparadzaniswa chete kwekugadzirisa nzira yekuvaka. Kubatsira kukuru kwevanhu vakuru SEO ndechokuti iwe unokwanisa kutora webhusaiti yako munzvimbo ino iri nyore nekuda kwekukwikwidzana kwakanyanya. Iva nechokwadi chekuti une nzira yekuita mari yako motokari, sezvo isingasviki.
Ngatitaurirei kuti tingatungamira sei muthuti wepamusoro kune nzvimbo yako yevanhu vakuru uye uende nayo kuGoogle TOP.
Chikwata chevanhu vakuru Chikwata cheOO kukurudzira
Ikoko mune zvikamu zvina zvinonyanya kukosha SEO zvinoshandiswa zvakanakisisa pamushandirapamwe wepurogiramu pamwe chete nehukuru hwekushandura webhusaiti: kukoshesa peji, chiremera chechiremera, ruzivo rwehutano hukuru, kukosha kwe inbound links.
kukosha kwepeji yewebhu kunoshanda sechinhu chinonyanya kukosha che Google. Zvinoratidzira vose vashandisi uye webwevheji vanoita sei zvakakosha imwe yewebhu yehuti yemubvunzo wemuiti. Kuti uite nzvimbo yako yakakosha, unofanirwa kujekesa metadata yako nehuwandu. Chokutanga pane zvose, unofanirwa kuisa mitsara inokosha yakakodzera muwebsite yako, zvinyorwa, tsanangudzo uye ma tag tag kuti uone kuti vashandi vako vachawana nzvimbo yako nyore nyore. Zvakare, unofanirwa kuunza huwandu hwehuwandu hwehuwandu sezvaunogona. Mune nyaya yevanhu vakuru mawebsite, munogona kunyorera nyaya dzisina kunaka uye munozviparidzira vhiki nevhiki.
Chiremera chemasimba ndicho chimwe chinhu chinonyanya kukosha icho chokwadi chinotaurirwa hachikwanisi kuitwa usiku hwose. Zvinotora nguva kuti uwane nzvimbo yehutano. Kuti uvandudze simba rako rechiremera, unofanirwa kubhadhara zvakanyanyisa kubasa rako rekugadzirisa uye kuumba chikwata chekuvaka chikwata chekuvaka. Uyezve, chiremera chemasimba chinokonzerwa nehuwandu hwemagariro evanhu sekuda-kudarika-kupera-kutengesa, kutendeuka, muvhareji nguva iyo munhu anoshandisa nzvimbo uye kuwedzera kwezinga.
Zvakare, unoda kuongorora simba rekubatanidza kwako zvakanyanya sezvo chiri chinhu chinonyanya kukosha nzvimbo yako yekare SEO. Iwe unofanirwa kuisa nzvimbo yako yekutsinhanisa chete pamasimba ekuremekedza uye anogara kwenguva refu ayo vanoshandisa kuvimba. Ichakubatsira iwe kusundira nzvimbo yako yevanhu vakuru pamberi pemamiriyoni anokurudzira vashandisi. Ndinokukurudzira kuti ufungisise nezvehutano hwako huwandu hwehuwandu uyewo nezvehutano hwavo. Zvakare, unofanirwa kuva nechokwadi chokuti unoisa backlinks yako pane zvakakodzera kumisika yako ye niche domains. Somuenzaniso, zvinotarisa zvisingaoneki kana iwe ukaisa hurukuro yako yewebhu webhusaiti kune chinzvimbo chinowedzera kudya kwevana.
Sezvo Google isingagamuchiri mapikicha ePC panzvimbo dzevanhu vakuru, kune nzira chete yekushandisa mari yekutsvaga kutsvaga. Ndinotarisira kuti kugadzirisa maitiro ataurwa munyaya ino kuchakubatsira iwe kuvaka chikwata chekusimudzira uye nekuvandudza nzvimbo yako yevanhu vakuru SEO Source .